July 11, 2019 Thuta Star 0
သမီး​လေး ဗစ်​တိုးရီယား​လေးရဲ့အမှုမှာ အမှုမှန်​​ပေါ်​ပေါက်​​ရေးအတွက်​ ဝန်းရံပါဝင်​​ဆောင်​ရွက်​သူ​တွေ၊ အလှူရှင်​​တွေရဲ့ ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းမှုနဲ့ အလှူ​ငွေလက်​ခံထားရှိတဲ့ သမီး​လေးဗစ်​တိုရီးယားကိုကူညီရန်​ သီးသန့်​ပြုလုပ်​ထားတဲ့ အလှူ​ငွေအ​ကောင့်​တစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ ဧရာဝတီ AYA ဘဏ့်​အ​ကောင့်​ဟာ ဗဟိုဘဏ်​ကညွှန်​ကြားချက်​နဲ့ ဒီ​နေ့မနက်​မှာ ယာယီဆိုင်းငံ့ ပိတ်​ခံထားလိုက်​ရတယ်​လို့ သိရပါတယ်​။ ကိုသက္ကမိုးညိုက ဘဏ်​ကို​မေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်​ရာမှာ​တော့ “​ငွေ​ကြေးဆိုင်​ရာ စုံစမ်း​ထောက်​လှမ်း​ရေးအဖွဲ့” ​က အ​ကောင့်​လှမ်းပိတ်​ခိုင်းလို့ ပိတ်​ထားရ​လိုက်​ခြင်းဖြစ်​​ကြောင်း […]
သမီး​လေး ဗစ်​တိုးရီယားရဲ့အမှုကိစ္စဟာ မလိုအပ်​ပဲ အရှုပ်​အ​ထွေးများစွာနဲ့ ပြည်​သူအများ ရင်​နဲ့မဆံ့ခံစား​နေရတဲ့ အမှုကိစ္စတစ်​ခုဖြစ်​သလို နာမည်​ကြီးအနုပညာရှင်​​တွေဟာလဲ ဒီသက်​ငယ်​မုဒိမ်းမှုနဲ့ပတ်​သက်​ပြီး ပြည်​သူ​တွေ နဲ့ တစ်​သားတည်းရှိ​နေခဲ့တာ အားလုံးအသိပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ အမှုမှန်​ကိုအမြန်​ဆုံး​ပေါ်​ပေါက်​​စေချင်​သူ​တွေရဲ့ အသံများစွာထဲကမှ အလှမယ်​​ရွှေအိမ်​စည်​ရဲ့ အမြင်​နဲ့ ရင်​ဖွင့်​ခံစားမှု​တွေကိုလဲ AlinnMyay ချစ်​ပရိသတ်​ကြီးတို့ ဖတ်​ရှုနိုင်​ကြ​​အောင်​ မျှ​ဝေတင်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ရပါတယ်​။ ” အိ်​မ်​စည့်​အမြင်​ဆိုရင်​​တော့ အမှုကိစ္စကြီးကိုအမြန်​ပြီး​စေချင်​တယ်​။ […]
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး လိုအင်ဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေ ကံဇာတာအညံ့များလည်း ပပျောက်ပြီး ကံပွင့် စန်းပွင့် မေတ္တာရေး အချစ်ရေးများ အလုပ်ကိစ္စများ အဆင်ပြေကြပါစေ ( ဇူလိုင် 11 မှ 17 အထိ )။ တနင်္ဂနွေသမီးများ ဒီကာလအတွင်း အလုပ်တွေကို ကောင်းစွာ ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် […]
ရန်ကုန်တွင် အာရှဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းချုပ်ရုံးဖွင့်လှစ် နိုင်ငံပေါင်း ၁၂ နိုင်ငံပါဝင်သောအာရှဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းချုပ်ရုံးဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ချုပ်နှင့် နယ်စပ်တောင်တန်းဒေသသာသနာနုဂ္ဂဟအသင်း(ဗဟို)ကဦးဆောင်၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရမ်းကုန်းမြို့နယ်တံတားလေးလမ်းဝဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်၌ ယနေ့ နံနက်က ကျင်းပခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်ထေရဝါဒငါးနိုင်ငံတွင်ဦးဆောင်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်းကမ္ဘာ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွင်မူနောက်ကျကျန်လျက်ရှိနေသေးသည့်အတွက်ယင်းကိုမြှင့်တင်သည့်အနေဖြင့်အာရှတိုက်အတွင်းရှိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်ပူးပေါင်းကာဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး၊ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကူညီယိုင်းပင်းနိုင်ရေး၊ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူသားအားလုံး၏လူမှုဘဝသာယာကာတစ်သွေးတည်းတစ်သားတည်းရပ်တည်နိုင်ရေးတို့ကို ရည်ရွယ်ရှေးရှု၍လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ထိုင်းနိုင်ငံမဟာချူလာယောင်ကွန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်အမှူးပြုသောသင်ကြားစီမံဆရာတော်များနှင့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်အဂ္ဂမဟာပဏ္ဏိတအဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကပဏ္ဏိတဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တကုမာရ၊ဒုတိယကျိုက်ထီးဆောင်းဆရာတော်အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကတဇဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တနာဂဒီပအမှူးပြုသောသံဃာတော်များ၊သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသူဦးအောင်ကိုနှင့်တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များ၊မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ချုပ်နှင့်နယ်စပ်တောင်တန်းဒေသသာသနာနုဂ္ဂဟအသင်း(ဗဟို)ဥက္ကဌဝဏ္ဏကျော်ထင်ဒေါက်တာဦးခင်ရွှေနှင့်အသင်းဗဟိုကော်မတီဝင်များ၊ထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအို၊သီရိလင်္ကာ၊အန္ဒိယ၊စင်္ကာပူ၊ဗီယက်နမ်၊တရုတ်၊ကိုရီးယား၊အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံများမှဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဧည့်ပရိတ်သတ်များရာနှင့်ချီ၍ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ Credit: Pyi Myanmar Unicode ရနကြုနတြှငြ အာရှဗုဒျဓဘာသာအသငြးခွုပရြုံးဖှငြ့လှစြ နိုငငြံပေါငြး ၁၂ နိုငငြံပါဝငသြောအာရှဗုဒျဓဘာသာအသငြးခွုပရြုံးဖှငြ့လှစပြှဲအခမြးအနားကိုမှနမြာနိုငငြံထရဝေါဒဗုဒျဓဘာသာအဖှဲ့ခွုပနြှငြ့ နယစြပတြောငတြနြးဒသသောသနာနုဂျဂဟအသငြး(ဗဟို)ကဦးဆောငြ၍ရနကြုနတြိုငြးဒသကှေီးမရမြးကုနြးမှို့နယတြံတားလေးလမြးဝဇမျဗူသီရိဗိမာနတြော၌ […]
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သမ္မတကြီးပွဲကြမ်းပြီ!!!! Wisdom Hill ကျောင်းကိုပါ အစိုးရက အရေးယူမယ်။ မူကြို ပြန်ဖွင့်ခွင့်ရဖို့ မလွယ်တော့ဘူး၊ သူပိုင်တဲ့ တခြား မူ၊ လယ်၊ ထက် ကျောင်းတွေကိုလည်း ပြန်စိစစ်ဖို့ သမ္မတက ပညာရေး ဝန်ကြီးကို ညွှန်ကြားလိုက်ပြီ။ ကလေးအမှု ဖြစ်စဉ်ကြောင့် […]
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာယခုလက်ရှိအချိန်တွင် တရားခံအောင်ကြီးအား တရားခံအဖြစ်စွပ်စွဲကာတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသို့ တရားစွဲ ဆို ထားမှု အ ပေါ် နမ့်စန်မြို့ ကကိုယ်ပိုင်အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦး ကောင်းမြတ်သူက ယနေ့ မှာတော့ အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ် “မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ ငွေမရှိတဲ့သူတွေကို ထောင်ထဲပို့တာလား။”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောထောက်နောက်ခံမရှိတဲ့ ဆင်းရဲသားတွေကတော့အမှုအခင်းဖြစ်ရင် ခင်ဗျားတို့ကို […]
Wisdom Hill ကျောင်းအုပ်ရဲ့အစ်မဖြစ်သူဒေါ်သီရီမေရဲ့တရားဝင် ဖြေရှင်းချက် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ Wisdom Hill ကနေပြီးတော့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သက်ငယ် မုဒိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင် သတင်းမှန်တွေ ဆိုပြီး လူမှုစာမျက်နှာတွေမှာ ရေးသားမှုတွေ ပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ Wisdom Hill […]
ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတ္တိရှိရှိ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ ယမန်နေ့ ညက ရဲဇာနည် Page ကနေ ဦးသက္ကမိုးညို နဲ့ မပိုးဖြူတို့ကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းဖုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်း ထုတ်ပြန် ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူမှု ကွန်ရက် […]
အကြွေးနဲ့ထီရောင်းပေးတဲ့ထီသည်ကြီးကို ကားတစ်စီးပြန်ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ အဘွားဒေါ်ခင်တင့် 11.7.2019တဦး​မေတ္တာနဲ့တဦး​စေတနာပါပဲသိန်း(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှင်အဖွားဒေါ်ခင်တင့်မှရွှေထီးထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဦးစောဝင်းအားကားတစီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်​။ Source:U Aye Minn UNICODE အကွှေးနဲ့ထီရောငျးပေးတဲ့ထီသညျကွီးကို ကားတဈစီးပွနျဝယျပေးခဲ့တဲ့ အဘှားဒျေါခငျတငျ့ 11.7.2019တဦးမတ်ေတာနဲ့တဦးစတေနာပါပဲသိနျး(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှငျအဖှားဒျေါခငျတငျ့မှရှထေီးထီအရောငျးကိုယျစားလှယျဦးစောဝငျးအားကားတစီးလှဲပွောငျးပေးအပျခဲ့ပါတယျ။ Source:U Aye Minn
အိမ်နီးချင်းအိမ်ကို သံပန်းပေါက်ထဲခေါင်းလျှိုပြီး စပ်စုကြည့်သည့်အမျိုးသမီး ခေါင်းပြန်ထုတ်မရ….
သံပန်းပေါက်ထဲ ခေါင်းလျှိုဝင်ပြီး အိမ်နီးချင်းအိမ်ကို လှမ်းစပ်စုသည့်အမျိုး သမီးတစ်ဦး ငါးနာရီလုံးလုံး ခေါင်းပြန် ထုတ်မရဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ကိုလံဘီယာသ တင်းတစ်ရပ်က ဆိုသည်။ ကိုလံဘီယာ နိုင်ငံ လာဗာဂျီးနီးယားဒေသတွင် နေထိုင် သည့်အမျိုးသမီး ယင်းသို့သော အဖြစ်မျိုး နှင့် ကြုံနေရပုံမှာ အွန်လိုင်းတွင် ပလူပျံ သွားသည်။ အိမ်နီးချင်းအိမ်ကို စပ်စုချင်၍ […]